Ady Sarotra Ho An’ireo Vehivavy Karibeana Ny Fiarovana Ny Fitovian-jon’ny Vehivavy Sy Lehilahy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Aogositra 2016 2:45 GMT
Dikasary avy tamin'ny vohikala ho avy Black Feminisms Forum (BFF) AWID (Sehatra hiseraseràna), vinavinaina hapetraka any Brezila ny Septambra 2016.
Ho mpiara miasa amin'ny votoaty ao amin'ny “Black Feminisms Forum” (Sehatra Hiresaseran'ireo Mpiaro ny Zon'ireo vehivavy Mainty) izay hiseho any Brezila ny volana Septambra ireo vehivavy mpitoraka bilaogy avy amin'ny bilaogy CODE RED (KAODY MENA), (mpiaro ny fitovian-jon'ny lahy sy vavy) monina any Karaiba, izay hiseho any Brezila ny volana Septambra. Manantena ny hitondra miaraka ireo olona hametraka tetikady hiarovana ny zo maha-olona — tafiditra amin'izany ny an'ireo vehivavy — ny rariny ara-toekarena sy ara-piarahamonina, ary fandriampahalemana, ilay forum (sehatra iseraseràna/karajia). Tena zava-dehibe ho an'ilay forum ny hoe “ho tonga maro ireo vondrom-piarahamonina tsy misy mpisolo tena hatrizay na atao an-kilabao”, tafiditra amin'izany ny tanora, ireo vehivavy mainty hoditra, ireo vehivavy tompontany, ireo mpivarotena, nanova fananahana sy ireo mpifindra monina mpikatroka mafana fo, ary ireo vehivavy manana fahasembanana.
Ao anatin'ny sehatra ny fikarakarana ilay hetsika, nampiantrano karinavalin'ny bilaogy ny CODE RED, mamporisika ny fandraisana anjara avy amin'ireo mpanoratra, mpanakanto, mpikatroka mafana fo, ary ireo mpisaintsaina hafa mba hieritreritra lohahevitra toy ny herisetram-panjakana ary ny fahasitranan'ny fitsaràna amin'ny resaka fitadiavana fitovian-jon'ny vehivavy mainty hoditra. Misy tenifototra #blackfeminisms mihitsy aza ao amin'ny Twitter.
Tsara aloha hatreto ny valin-kafatra, miaraka amin'ireo mpisera maro amin'ny Aterineto mamerina mibitsika loharanom-baovao, mampitombo fahalalana mikasika ilay karajia ary mitondra ireo heviny. Joan Joy Grant Cummings, Karibeana-Kanadiana mpikatroka , nanoratra mikasika ny feminisman'ny mainty hoditra ary ny firaisankina iraisam-pirenena. Nampahatsiahy ny traikefany izy amin'ny naha-vehivavy mainty hoditra voalohany azy lasa Filohan'ny Kaomitin'ny Hetsika Nasionaly ho an'ny Satan'ireo Vehivavy (NAC) — izay, tamin'izany fotoana izany, vondrona voalohany mpiaro ny tombontsoan'ny vehivavy Kanadiana. Ny taona 1998, taorian'ny nanafihan'ny polisy ireo vondrom-piarahamonina mainty hoditra niaina am-pilaminana tany Kolombia, nangatahana ho iray tamin'ireo sivy mpikambana tao amin'ny fitsaràna nanahidahy ilay loza i Cummings. Manoratra izao i Cummings:
Ny hametraka ny zava-niseho sy hijery hoe iza no tomponandraikitra tamin'ny iray amin'ireo vono olona 198 voarakitra izay niseho tany Kolombia nandritra izany taona izany, no asan'ny fitsaràna.
Nasehon'ny fampanoavana niandraikitra ny raharaha ny porofo hoe ny 16 sy 17 May 1998, farafahakeliny lehilahy 30 isa, nirongo fiadiana marobe, no niditra tamin'ilay tanàna mpamokatra solika ao Barrancabermeja, namono olona efa ho 32 isa. Kanefa na nilaza aza ny filohan'ilay andian-jiolahy mpamono olona fa izy no tomponandraikitra tamin'ny fitarihana ilay vono olona, tsy voasazy mihitsy izy hatramin'izay. […]
Taorian'ny namakiana ny didim-pitsaràna, sahirana tanteraka tamin'ny fihetsiky ny olona aho – toy ny hoe nisy làlan-drano maro nanapoaka ireo fefilohany. Tsingerintaona voalohan'ilay vono olona tamin'izay. Nitomany tamin'alahelo, hirifiry, hafaliana, fahitàna ny rariny, ireo olona – “nino azy ireo ny olona hafa”. Nanao zavatra maro tokoa nanerana ny tany, izay nanahirana ireo governemanta roa – Kanada sy Kolombia io Fitsaràna io.
Niverina niara-niasa tamin'ireo vondrom-piarahamonina moa izy avy eo:
Nanao fifindrafindràna be tao Kolombia ireo Afrikàna-Kolombiàna. Niharana ireo karazana herisetra rehetra izy ireo -fakàna an-keriny, famonoana, vonomoka, ary noesorin'ireo hery tsy miankina amin'ny fanjakana tanteraka tamin'ny taniny mihitsy. Na dia natao mazava hiarovana azy ireo sy ny taniny aza ny Lalàna faha-70 izay nolaniana. Araka ireo Afrikàna-Kolombiàna mpikatroka mafana fo maro ao anatin'ilay vondrom-piarahamonina, mety ho mifanakaiky amin'ny fanapahankevitra samirery mety ho vitan'izy ireo io. […]
Tao anatin'ireo 2 herinandro nahatao ahy, nandray anjara tamin'ireo fivorian'ny vondrom-piarahamonina mikasika ny ady aho, saika niteny daholo momba ny Lalàna faha-70 ireo fehezanteny rehetra. Io no lalàna izay tokony hiaro ny zon'ireo Afrikàna-Kolombiàna. Kanefa, nanitsakitsaka io mivantana sy ankolaka ilay governemanta nandany azy io, amin'ny fanomezana vahana ireo vondrona izay minia tsy mahafantatra ilay lalàna!
Nanazava ny fandehan-javatra i Cummings:
Maherin'ny folo taona aty aoriana, voaboraka fa naka ‘tsy ara-dalàna’ ny tanin'izy ireo, ireo mpandraharaha 22 sy ny “Chiquita Bananas”, mba hanaovany ny fandraharahàny. Niaiky ny Chiquita Bananas fa tao anelanelan'ny taona 1997-2004, nandoha 2 tapitrisa dolara tamin'ireo hery tsy miankina amin'ny fanjakana izy mba hanesorana ireo Afrikàna-Kolombiàna tamin'ireo taniny. Noho ireo vitany (El Tiempo), nohenjehin'ny Governemanta Kolombiàna tamin'ny lalàna ireo 22, ny taona 2010.
Kanefa, efa taona 2016 isika izao, miverina esorina amin'ny taniny indray ilay vondrom-piarahamonina!
Amin'ny maha feminista Mainty anay, fantatray fa tokana ihany ny zavatra tsy maintsy iadian'ny feminista — ny ady ho an'ny fitovian-jon'ny rehetra, izay idiran'ny fandravàna ny fanjakan-dehilahy, ny fanavakavaham-bolonkoditra, fanjakazakan'ny fotsy hoditra, fanjakan'ny fitiavan'ny tsy mitovy fananahana, kapitalisma etc…
Anaty lahatsoratra hafa, noresahan'ny CODE RED ny fanambaràna iray nahatonga resabe nataon'ny mpanao lalàna Bahamiana, Richard Lightbourn, ilay mpanao lalàna izay nanoso-kevitra vao haingana hoe “ankatoavin'ny firenena ny fanaovana lalàna izay mandidy ireo reny tokantena manan-janaka mihoatra ny roa ‘hamatotra ny tranon-janany’ mba hitsaboana ireo olana ara-tsosialin'ny firenena”, tamin'ny filazana hoe:
Any amin'ireo firenena mainty hoditra matetika no mivoatra ireo fanavakavahana tsy tia mainty hoditra.
Nandroso hevitra ny hanafoanana ireo Bahamiana mainty hoditra ilay mpanao lalàna, amin'ny alalan'ilay fomba fanao tsy fitiavam-behivavy, fanerena ankolaka ho lasa momba. […]
Tsy misoroka ny heloka bevava sy ny fahantrana mihitsy ny fanitsakitsahana ny zon'ireo vehivavy. Heloka bevava izany!
Natao hanao ilay asa sarotra izay hanaovana ny fiarahamonina ho mitovy zo kokoa ireo mpanao lalàna , fa tsy ny hilaza hoe ny fanafoanana ny olona mainty mahantra no làlana hizorany hanenana ny fahantrana!
Resahan'ilay bilaogy ihany koa ny olan'ny herisetra ara-pananahana atao amin'ireo tovovavy kely any Karaiba, amin'ny fitanisàna ny fiampangàna fanolanana nahazo ny anadahan'ilay mpihira teraka tany Trinidad, Nikki Minaj, andiany hafa loko amin'ireo andian-tantara Trinidadiana maro malaza, izay maneho ireo tovovavy kely ho toy ny mpiremby firaisana ara-nofo, ary ny fanandraman'ny tomponandraikitry ny governemantan'i St. Lucian hibahana ilay ankizy 10 taona tratran'ny fanolanana tsy hahazo mandeha an-tsekoly:
Efa nametra-panontaniana ve isika hoe nahoana isika no maika ny hanameloka sy hanalabaràka ireo ankizivavy tratry ny fanolanana, fa tsy afaka manery ireo lehilahy ireo kosa TSY hanolana ankizy? Nahoana no sarotra loatra ny mampibaby andraikitra ireo lehilahy tamin'ireo zavatra nataony? Nahoana no sarotra loatra ny manao ny fanolanana ho tsy azo ekena? Nahoana isika no mino fa mampididoza sy mahery ny fampidirana an-tsekoly ireo ankizivavy mpianatra miohatra amin'ireo lehilahy sy miantso ny mpanolana ho mpanolana?
Anatin'ny fanomanana ilay karajian'ny feminisma mainty hoditra, hitohy ho sehatra hizaràna ireo fomba fijery hafa ny CODE RED, mikasika ireo fanambin'ny fitovian-jon'ny lahy sy ny vavy ho an'ireo vehivavy hafa volonkoditra. Afaka manaralka ireo zava-baovao ianao — ary mametraka ny fandraisanao anjara manokana — ato, na manaraka ny adihevitra ao amin'ny Facebook sy Twitter.